Espaina : Nahomby Ny guifi.net, Tambajotra Maimai-Poana Tsy Mila Kofehy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2013 0:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Português, English
Ny guifi.net [es] dia ny mpiserasera tsirairay no tompony, tambajotra misokatra sy tsy mitanila ka mampitohy ny solosainany ao anatina karazana intraneto sady mizara ny fidirana aterineto ity fikambanan'ny mpilatsaka an-tsitrapo tsy mitsaha-mitombo ity. Maimai-poana ny tambajotra tsy mitady tombombarotra, mora dia mora ny vola alòan'ny tsirairay noho ny fampitaovana ny tambajotra, ary afaka miditra sy mampiasa azy araka izay ilainy ny rehetra.
Voafariparitra ho tambatambajotra lehibe indrindra manerantany eo amin'ny karazany ny guifi.net, izay fomba nitondrana ny aterineto haingam-pandeha tany ambanivohitr'i Katalonina, faritra tsy mba nitondran'ny FAI (Orinasa mpamatsy ny aterineto) serasera, tamin'ny taona 2000. Tsy te-ho lany andro hankany Barcelona mba hidirana aterineto fotsiny i Ramon Roca ilay mpiara-manorina sady mpiasan'ny Oracle tamin'izany fotoana izany.
Ninamana tamin'ireo manampahefana tao amin'ny faritra i Roca sy ireo olona nitovy hevitra taminy mikasika ity ezaka tantanin'ny fiarahamonina ity, izay nahafahan'izy ireo nametraka fitaovan-tserasera teny amin'ireo toerana avoavo, tahaka ny eny amin'ny tilikambom-piangonana, ary nihitatra tsikelikely hatrany ny guifi.net avy eo.
Na dia efa taom-polo aza hatrizay ny nahaterahan'ny guifi.net, tambajotran'ny (Ianao Ihany no Manao azy) tsy mila kofehy izay fomba iray hitondrana ny aterineto eny amin'ireo toerana tsy ahitana ny tsenan'ny (FAI) Mpamatsy tolotra Aterineto, tsy dia nivoatra be tahaka izao ny zava-misy, araka ny fanazavan’ [es] i Roca tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny tranokalam-baovao Eroski Consumer tamin'ny taona 2010:
Mbola ilaina ny safidy hafa ao Espaina, firenena manana taham-pidirana ambany amin'ny aterineto raha oharina amin'ny salanisa ankapobeny ao Eoropa. Araka ny tahiry avy amin'ny Eurostat, 68 isan-jaton'ny tokantrano ao Espaina no nanana aterineto tamin'ny taona 2012, mbola ambany amin'ny salanisan'ny Vondrona Eoropeana izay 76 isan-jato ary mametraka an'i Espaina ho naman'ireo firenena tahaka an'i Repoblika tsheky, Kroasia ary Italia. Espaina ihany koa no manana ny aterineto haingam-pandeha lafo indrindra ao Eoropa, araka ny fikarohana avy amin'ny mpanaramason'ny fifandraisandavitra Ofco.
Milahatra ihany koa ny governemantam-paritra maromaro manararaotra [es] ity tambajotra ity. Ny fiadidian'ny tanàna tahaka an'i Avinyonet del Penedès, tanàna ahitana mponina mahery kelin'ny 1500 ao atsimo-atsinanan'i Katalonina, sy Cabanes [es], tanàna manana mponina eo ho eo amin'ny 2900 manamorona ny morontsiraka avaratr'i Valence iny, ohatra, no mampiasa ny guifi.net mba hitondra ny fifandraisana aterineto eny amin'ireo mponina izay mety ho tsy mahatakatra izany ka manohana ny tambajotra amin'ny alalan'ny fametrahana vona lehibe mpampitohy izay mampita ny famantarana tsy misy kofehy (~wifi) ho an'ny manodidina.
Ny Hopitaliben'i Vic [ca] no faritra farany nampitohizina tamin'ny alalan'ny hosona tamin'ny fiandohan'ity fahavaratra ity, izay tafiditra ao anatin'ny fametrahana hosona ny ao amin'ny faritr'i Osona ho tratran'ny aterineto. “Tsy liana amin'ny fanaovana izany ireo orinasa goavana ary tsy manana ny enti-manao kosa ireo orinasa madinika. Ny fanaovana izany eo anivon'ny rehetra [ … ] no fomba tokana sy tsara indrindra”, hoy i Roca tamin'ny habaka fampahalalam-baovao El9Nou.cat.
Tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, nomen'ny banky espaniola Bankia ao Matarò, Katalonina ho fanomezana hoan'ny guifi.net ny hosona telo kilometatra [ca] – izay an'ny banky fametrahana tahirim-bola teo aloha Caja Laeitana efa lasan'ilay banky amin'izao fotoana-.
Ny soritrasa iray manontolo, hoy i Roca tamin'ny openSUSE.org tamin'ny taon-dasa, dia ny hananganana “aterineto hoan'ny rehetra. Izay midika fananana tambajotra iombonana manerantany azo isoloana ny eo, tsy maninona izay ilazanao azy na guifi.net izany na tsia”.